Mabhichi akanakisa muChiclana: La Barrosa, Playa del Puerco uye Sancti Petri | Kufamba Nhau
Mabhichi akanakisa muChiclana: La Barrosa, Playa del Puerco neSancti Petri
Lola curiel | | Spain maguta, Beaches
Yakagadzwa nevaFenikiya muzana ramakore rechisere BC kumaodzanyemba kweCádiz, Chiclana inofungidzirwa rimwe remaguta ekares wedunhu. Muna 1303, Fernando IV akapa nyika yaChiclana kuimba yeMedina Sidonia, kunyanya kuna Alonso Pérez de Guzman, uye nekudaro guta razvino rakavambwa. Kutamisirwa kwevanokudzwa uye iko kukura kwakaunzwa neAmerica nechikoroni, kwakazoguma kwave kuitazve uye kwakatungamira mukubuda kwayo kukuru.
Nhasi, Chiclana anotambira huwandu hukuru hwevashanyi, vekunze uye vekunze, vanouya vachikwezva nemamiriro ekunze uye ne hupfumi hwepanyama hwenzvimbo. Uye ndezvekuti, yeiyo 203 km² iyo inogara matemu, kanenge chetatu chikamu cheNational Park yeBay yeCádiz. Mahombekombe ayo, makiromita mashoma kubva kunharaunda yemadhorobha, anoumba imwe yeakanyanya kutaurwa gungwa mushanyi mushanyi. Kuti urege kupotsa mukana wekunakidzwa nemazororo ako pajecha reChiclana, Ini ndichakuudza mune ino posvo ayo ari akanakisa mahombekombe.
1 La Barrosa Gungwa
2 Puerco Gungwa
3 Sancti Petri Gungwa
3.1 Iyo Nhare yeSancti Petri
La Barrosa Gungwa
Kunyangwe iri munzvimbo yemaguta, kunaka uye kuchengetedzwa kwemahombekombe aya kwakasarudzika. Muchokwadi, ine zvitupa zvakatipoteredza senge iyo Blue Mureza, yakanangana nemabhichi nezviteshi, uye inoenderana neIO 14001, muyero wepasi rose wekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
Su nyore kuwana uye hupamhi hwemhenderekedzo yegungwa, iyo ingangoita mamita makumi matanhatu paupamhi, riite a yakasarudzika sarudzo kune vashanyi vari kutsvaga yakanaka nyanza, iyo inogona kusvikwa nemotokari uye neakasiyana masisitimu, pasina kuramba mvura yakachena uye nerunako rwechisikigo rwegungwa reCadiz.
Kunyangwe kurara pasi kuti uzorore pajecha rayo rakanaka regoridhe kwatova kunakidza, La Barrosa zvakare ine chinonakidza chinopihwa kune vanonyanya kushanya vashanyi. Kune zvikoro zve surf uye kitesurf zvinopa makosi uye zvine masevhisi emitambo yekurendesa. Zviitiko zvakarongeka zvakare izvo zvinokutendera iwe kuyemura iyo nharaunda uchinakidzwa nerunonakidza uye rwunonakidza ruzivo, zviripo equestrian nzvimbo dzinopa kutasva bhiza pamhenderekedzo.
Kana iwe uri yakawanda lounger uye bhawa bhawa, iwe unogona kuwana zvishoma zvinotonhora zvinwiwa kana madoro paMojama Beach kana kuAlbarrosa, nzvimbo dzese dziri mbiri dzinowanikwa panzvimbo yejecha uye, kuwedzera kune yakanaka kwazvo mamiriro, ivo vanopa chikafu chinonaka. Vhura iyo promenade iwe unowana dzimwe gastronomic sarudzo, maresitorendi ane masitepisi mahombe akakodzera kuona kunyura kwezuva. Usasiye usina kuedza iyo hove dzakakangwa, chaiyo dhishi remahombekombe egungwa reMediterranean.
Pakati peNovo Sancti Petri uye iyo Roche mataundi El Puerco beach inowedzera. Zita rayo rinobva kushongwe iyo inomira panzvimbo yakatenuka yemahombekombe aya uye yaive chikamu chehurongwa hwemagadhi ekurinda akarairwa naFelipe II kuvakwa muzana ramakore rechi1811. Yakavakwa nezvinhu zvekutanga kweRoma, nharire yakapupurira Hondo yeChiclana, kumukira kwemauto kwakarwiwa muna XNUMX munharaunda yayo, mune Hondo yeRusununguko yeSpain. Makore gare gare, yaishandiswa kudzora kufamba kwetunasi, sezvo Chiclana inzvimbo ine chiitiko chepamusoro che tuna. Parizvino, iyo shongwe ine chikuva kumakumbo ayo chinoshanda senzvimbo yekutarisa.
PaPlaya del Puerco, futi imba yekare yeCivil Guard kubva muzana ramakore rechiXNUMX yakachengetedzwa. Chivako, icho chakasiiwa kwenguva yakareba, chakagadziridzwa uye zhizha rapfuura Grupo Azotea akavhura iyo Cuartel del Mar ipapo, yekudyira ine hunyanzvi iyo inoshandisa iyi nzvimbo yakakosha sechiratidzo chekuzivikanwa uye inopa vatengi vayo menyu isingakundike mune imwe yenzvimbo dzakanyanya kunaka yenzvimbo yacho.
Iyo mahombekombe yakafanana neLa Barrosa, ine jecha regoridhe nemvura yakachena, kunyange hazvo iine dzimwe nzvimbo dzakasvibirira, mirwi uye mawere ane matombo anoipa iyo kutaridzika kwechisikigo uye inokwezva kune avo vanotsvaga imwe nharaunda yakavharika kubva kumaguta.
Sancti Petri Gungwa
Es rimwe remabhichi anozivikanwa kwazvo munzvimbo iyi. Pane dzimwe nguva, kana mvura yacho yakadzika kwazvo, inogona kuwanikwa nekufamba kubva kuLa Barrosa. Sancti Petri Gungwa rakakamurwa kuita zvikamu zviviri, UN mhandara yekutanga kutambanudza ine yakakwira ecological kukosha uye a gumbo repiri kutambanudza kubva kune jetty kusvika kune yekare musha wehove weSancti Petri. Dhorobha rakavambwa nekuda kwenzvimbo dzevabati vevabati vehove vakabatanidza munharaunda yeChiclana iyi indasitiri yechokwadi yakanangana nehove nekuchengetedza tuna.
Sancti Petri anga asingagarwe muna 1973, asi parizvino ari munzira yekudzosa uye ave nzvimbo yevashanyi yekufarira kune avo vanoshanyira gungwa reCadiz. Iwo maresitorendi ari mutaundi anopa zvigadzirwa zvitsva kubva kugungwa, achiva a nzvimbo yakanaka yekunakirwa nechikafu chakajairika cheCádiz. Windsurfing zvikoro, kufamba nechikepe uye makambani ayo kuronga zviitwa zve nautical Ivo vakatamira kunharaunda, vakwezva nehupfumi hwayo hwepanyama.
Iyo Nhare yeSancti Petri
Kubva kumahombekombe iwe unogona kuona iyo Castillo de Sancti Petri, yatove yemuguta weSan Fernando, asi inoonekwa se Chiclana chiratidzo. Iyo nhare yakavakirwa pachitsuwa uye kusvika ipapo iwe unofanirwa kuzviita kubhurawuza. Kufambisa mukana wevashanyi, jetty yakavakwa. Pane kayak mafambiro izvo zvinobva kuPunta del Boquerón uye zvakare kubva kuguta uye izvo tIvo vanotungamira kuchitsuwa kuti iwe ugone kushanyira nhare.
Iyo turret ndiyo chikamu chekaresa chenhare, yakavakwa muzana ramakore regumi nematatu naAdmiral Benedetto Zacarías panguva yekutorazve kweCádiz. Gare gare, muzana ramakore regumi nemasere, mamwe ese akavakwa uye akashandiswa senzvimbo yehondo panguva yeHondo yeRusununguko, ichishandawo pane dzimwe nhambo sejeri revasungwa vezvematongerwo enyika panguva iyoyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Spain maguta » Mabhichi akanakisa muChiclana: La Barrosa, Playa del Puerco neSancti Petri